မြ၀တီ - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Ms. Toshiko ABE အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Wednesday, 16 January 2019 17:12 font size decrease font size increase font size
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Ms. Toshiko ABE အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီးနှင့်အတူ ဂျပန် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA နှင့် တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘင်္ဂါလီ အရေးကိစ္စများ နှင့် လက်ရှိဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ပြဿနာများ အား အစိုးရနှင့် တပ်မတော်က ဖြေရှင်းဆောင် ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက် တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း တပ်မတော်၏ သဘောထားနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် လမ်းဖွင့်ပေးထားသည့် အခြေအနေများ၊ ယင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ချက် အပေါ် ဂျပန်နိုင်ငံက ထောက်ခံကြိုဆိုမှု အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဂျပန်နိုင်ငံကကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အကူအညီပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများကိုပါ သာတူညီမျှရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်မှု အခြေအနေများ အား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ပြီး စုပေါင်း ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Read 439 times Last modified on Thursday, 17 January 2019 11:36
More in this category: « မန်ယူအသင်း တရားဝင်နည်းပြဖြစ်လာရန် ဆိုးလ်ရှား ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ) အားကစားပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ၊ အားကစား အောင်မြင်မှုသည် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လူမျိုး၏ ဂုဏ်သိက္ခာအဆင့်အတန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖော်ညွှန်းနေ »